म्युजिक भिडियो देखि पोर्नहबसम्म प्रियंका! - Experience Best News from Nepal
म्युजिक भिडियो देखि पोर्नहबसम्म प्रियंका!
प्रकाशित मिति : शनिबार, साउन २६, २०७५
कहिलेकाहीँ एउटै कामले सुख पनि दिन्छ र दुःख पनि । यो कुरा प्रियंका कार्की बराबर कसलाई थाहा होला ? ‘कथा काठमाडौं’ कै सेटमा प्रियंकाले हुनेवाला पति आयुष्मान जोशीलाई भेटिन् । यही फिल्मको सेटमा प्रेम टुसायो, यहीं झाँगियो र हराभरा भयो । दुवैले केही समयअघि इन्गेजमेन्ट गरेर प्रेमलाई नयाँ नाम दिए ।
यही फिल्मको गीत केही दिनअघि सार्वजनिक भयो, जसले प्रियंकालाई पक्कै खुसी दिएको छैन । खुसी दिन्थ्यो भने उनले फेसबुकको टाइमलाइनमा पक्कै यो गीत सेयर गर्थिन् । म्युजिक भिडियो सेयर गर्ने प्रियंकाले आफू खेलेको फिल्मको गीत सेयर नगर्ने कुरै आउँदैन ।
प्रमोद अग्रहरीसँगको अन्तरंग दृश्यले भरमार ‘रातका कुरा’मा धेरैका लागि उनले हद पार गरेकी छन् । यो गीतलाई लिएर प्रियंका र आयुष्मान दुवैलाई उडाउने काम भइरहेको छ । यतिसम्म त ठीकै थियो तर गीतको केही अंश पोर्न हबमा पनि भेटिएपछि गीतको चर्चा सेलाउने छाँट छैन ।
प्रियंका कार्की सर्च गर्दा प्रियंकाको यो भिडियो देखिन्छ । कहिले केले त कहिले केले अप्ठ्यारो पार्ने प्रियंकालाई यो चोटि भने गीतैले अप्ठ्यारो पारेको छ । यही फिल्मले आयुष्मान भेटायो तर यही फिल्मले तनाब पनि दिइराखेको छ । यस्तोमा प्रियंका खुसी हुनु कि दुःखी !
बल्ल सुरु भयो प्रियंकाको जाडो याम !! मङ्सिरसम्म स्विम सुट अब ज्याकेट
के थियो कारण जसले प्रियंकालाई ट्रेलरमा समेत स्थान दिइएन ? यस्तो छ कारण !!
टड्का दिने निहुँमा झड्का !! कथा काठमाडौँ हैन लाइफ इन अ…मेट्रोको सिरिज मात्रै !!
ल फेरी सुरु भयो प्रियंका र आयुष्मानको नयाँ भ्याकेसन !!
झन् झन् बढ्यो प्रियंका र अयुष्मानको रोमान्स !! भड्किलो कि सानदार हेर्नुहोस
झक्कडलाई चिनाएको गीत ‘कानमा डबल झुम्का’ सार्वजनिक !! भिडियो सहित
जब गायिका नेहा कक्कड़ले क्यामेरा सामु खोलिन गाउन !! जे देखियो !! भिडियो सहित
हँसिलो चेहेराबाट डिप्रेसनमा गायिका नेहा कक्कड !!
‘तिरिमिरी तीन तारा’ गीत मै भयो १५ लाख खर्च !! आखिर के मा भयो यती खर्च ?
हट मोडल सोनिका रोकायाको फिचरिङमा ‘ओइ सुन’ सार्बजनिक !!
रबि बने नेपाल आइडल २ का विजेता !! पाए यी पुरस्कार